सशस्त्रमा पनि बढुवाको हलचल – TajaNepal
Home /Blog/सशस्त्रमा पनि बढुवाको हलचल
प्रम फर्किनासाथ दुवैतिर बढुवा
काठमाडौं । अर्ध सैनिक बल सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी बढुवाको लहर चल्दैछ । यस पटक तीन व्याचका एसएसपी पदमा रहेकाहरूले डीआईजी पद पड्काउन दौडधूप गरेका छन् । तर आईजीपी शैलेन्द्र खनालको जोड भने वरिष्ठता, जेष्ठता, योग्य, क्षमतावान् र कमान्ड गर्न सक्नेतर्फ रहेको छ । सशस्त्रमा हिजो सेनाबाट प्रवेश भएका र प्राविधिक क्षेत्रबाट प्रवेश भएकाहरूको बोलवाला थियो । अब त्यस्तो छैन । ‘यस पटक काम गर्ने टिम डीआईजीमा बढ्वा हुन्छ’– स्रोतले भन्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सिफारिस गर्दा नै विवाद नआउने र सङ्गठनमा क्षमतावान्हरूलाई छनोट गर्न आईजीपी खनाल र एआईजी नारायणबाबु थापालाई निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
यस पटक कमान्ड नदेखिए पनि प्रजाभक्त श्रेष्ठ आईजीपीको कृपामा डीआईजीमा बढुवा पर्ने सम्भावना छ भने नारायणदत्त पौडेल, रामप्रकाश श्रेष्ठ, राजु अर्याल, कृष्ण कर्माचार्य पनि सशस्त्रमा डीआईजी हुने छन् । सङ्गठनले दिएको जिम्मवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेहरूले बढुवाको अपेक्षा राख्नु नौलो होइन । दरबन्दी घटेको सङ्गठन पुनःसंरचनामा गएको कारण सशस्त्रमा एसएसपीको भीडबाट पाँच जना डीआईजी पदमा छनोट हुन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिका भ्रमणले रोकिएको यो बढुवा प्रक्रिया उनी फर्केसँगै सुरु हुने भएको छ । तर सशस्त्रमा नेपाल प्रहरीको जस्तो लामो समयसम्म बढुवा रोकिएको छैन ।
एआईजीले ठाउँ पाए, डीआईजी को–को ?
सरकारले शुक्रवार एआईजीमा बढुवा भएका तीनै जनाको पदस्थापना गरेको छ । यस पटक एआईजी भएका पुष्कर कार्कीलाई कार्य तथा अपराध, ठूले राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन र धीरु बस्नेतलाई तालिम केन्द्र खटाइएको छ । अहिलेको चुनौती सामना गर्नका लागि प्रहरी हेर्डक्वार्टरले पुष्कर कार्कीलाई अपराध अनुसन्धान दिएर कञ्चनपुर काण्ड छानबिनमा खटिएका धीरुलाई प्रतिष्ठानमा पठाएको हो ? प्रश्न गर्नेहरू धेरै छन् । ठूले राई गृहमन्त्री निकट भएकाले मानव स्रोत पाएका छन् । उनलाई त्यो भारी बन्ने छ । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका यात्राबाट फर्किनासाथ एसएपीहरूको भीडबाट ११ जना डीआईजी बन्ने छन् । त्यो भीडको काम सम्पन्न हुनासाथ एसपीबाट एसएसपीको बढुवाको लहर चल्ने छ । आईजीपी को हुन्छ, मास्टरलाई मानव स्रोतमा राखिन्छ प्रशासन र अर्थमा राख्थ्यो । अहिले पनि त्यही रोग प्रहरीमा ज्यूँदो छ । अहिले डीआईजीमा बढुवाको प्रतिस्पर्धा छ । ११ डीआईजीमा १५ जना एसएसपीको बढुवाका लागि भिड्ने र खर्च गर्न सक्नेहरू धेरै छन् । डीआईजी पहिलो नम्बरमा हुने आईजीपी हुन्छन् । प्रतिस्पर्धामा प्रधुम्न कार्की, शैलेश थापा, वसन्त पन्थ, हरि पाल, गणेश ऐर, ठाकुर ज्ञवाली पहिलो टिमका हुन् भने विश्व पोखरेल, वसन्त लामा, रवीन्द्र धानुक, उत्तम सुवेदी, धीरजप्रताप सिंह नै डीआईजी हुने पक्कापक्की जस्तै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अमेरिका भ्रमणले राजनीतिक तहमा नेकपाको जिल्ला पार्टी एकता र पेसागत सङ्गठनहरूको एकता घोषणा रोकिएको मात्र होइन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी बढुवा पनि रोकिएको अवस्था छ ।